Dadaallada Suuqgeynta Emailkaaga Waxba Muhiim Ah Ma Tahay Haddii Aanad Tahay Mobilada | Martech Zone
Markii aan raadineynay inaan horumarino hawlgalkeena, waxa ugu horeeya ee aan qabanay waxay ahayd hirgalinta qaabab email oo jawaab leh iyadoo la adeegsanayo barxadeena Wareeg Press, si loo qaybiyo nuxurka (Qor maalin kasta ama toddobaadle). Isbedelka tirakoobka ma ahan wax yar oo cajiib ah. Waxaan u dirnaa emaylkeena toddobaadlaha ah in ka badan 70,000 macaamiil Isniinta iyo tan Analytics wuxuu ina tusayaa in taasi ay tahay kororka ku yimid taraafikadayada wixii ka baxsan wax kasta oo dhexdhexaad ah ama dallacsiin ah.
Ma aysan dhicin ilaa e-maylladayada loo hagaajiyay daawashada moobiilka, in kastoo! Qaab dhismeed nadiif ah oo hal-khaan ah oo si sahlan loo gujin karo badhano waaweyn iyo xiriiriyeyaal ayaa sameeyay farqiga u dhexeeya dadka oo ka riixaya emaylka dib qodobbada. Hadda waxaan ka shaqeyneynaa dib u qaabeyn guud ee baloogga si ay u siiso waayo-aragnimo qurux badan, jawaab-celin ah iyada oo loo marayo desktop, moobiil ama kiniin.
Jeclaaw ama ha jeclaan, adeegsiga aaladaha mobilada ayaa noo noqday dabeecad labaad. Adduunku si wanaagsan oo run ah ayuu u socdaa. Macaamiisha waxay u dhaqmayaan si ka duwan taleefannada casriga ah iyo kiniiniyada, kuwaas oo bixiya shaqooyin iyo kartiyo kala duwan, iyo ganacsiyo badan tani waxay ka dhigan tahay inay si fudud ku bilaabi karaan inay arkaan qaar ka mid ah macaamiishooda oo iska tagaya haddii suuqgooda moobiilku uusan gaadhin xoq. Haysashada istaraatiijiyad moobil oo macquul ah oo meesha taal ayaa lagama maarmaan u ah in macaamiisha ay ku soo noqdaan. Ciaran Carlisle, DisplayBlock
Tirakoobyadu ma ahan wax ka yar cajiibka moobiilka… haddii iimaylkaaga ama bartaadu aysan ahayn waayo-aragnimo isticmaale wanaagsan oo ku saabsan qalabka moobiilka, waxaad tuuraysaa tan maalgashi suuqgeyn ah Waa kuwan 3 tirakoob adiga:
Emailka furan ayaa furan 180% saddex sano gudahood laga bilaabo 15% ilaa 42%!
Goorma 68% ee Gmail iyo Yahoo! furmay ku dhaca taleefanka casriga ah ama kaniiniga.
75% e-mayllada laga daawado aaladaha moobaylka waxay u badan tahay in la tirtiro haddii aan moobiilku fiicnayn.
Tags: iimaylka tirakoobka suuqgeyntaemaylka furanemaylka tirakoobkaSuuqgeynta Mobilada iyo Mashiinkaemaylka gacantaemaylka jawaabta lehemaylka jawaabta lehsmartphoneemaylka casriga ahemaylka kiniinka
Sep 6, 2014 at 1: 00 AM
Xaqiiqdaas aadka u la yaabka badan si loo arko in inta badan dadka isticmaala taleefannada casriga ahi ay emayl ku furaan taleefannadiisa / keeda !!!